कसरी पाइरेसी भयो छ माया छपक्कै ? « Nepal Bahas
कसरी पाइरेसी भयो छ माया छपक्कै ?
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:२०
१६ कार्तिक, काठमाडौं । दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको सफल चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ पाइरेसी भएको छ । चलचित्र युट्युबबाट पाइरेसीमा परेको हो । कपिराइट सङअल नामक च्यानलबाट चलचित्र अपलोड भएपछि दीपकराजलाई तनाव भएको छ ।
चलचित्र गतबर्ष हलमा रिलिज भएको थियो भने ‘चलचित्र एप’मा पनि यो चलचित्र रिलिज भएको छ । यस्तै, चलचित्रलाई डीस होममा पनि रिलिज गरिएको छ ।
यो चलचित्रको युटुब राइट्स आमा अग्नी कुमारीसँग छ । निर्माता रोहित अधिकारीले चलचित्रको पाइरेसी गर्ने व्यक्तिको खोजी भैरहेको र कानुनी कारवाही गरिने बताएका छन् । यसअघि दीपकराजको चलचित्र पाइरेसी भएको थियो ।
#छ माया छपक्कै
प्रेम गीत ३ को नयाँ प्रदर्शन मिति तय
सिन्धुलीबाट ‘गोर्खा वारियर–२’ को छायाँकन सुरु
चलचित्र ‘टुल्की’ले पायो युनिभर्सल सर्टिफिकेट
फिल्म ‘गुञ्जन’ युनिट यतिबेला दुवईमा
स्थानीय जातको आलु रोप्दै किसान
कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्षम नेतृत्व आवश्यकः नेता सिंह
पाल्पा कांग्रेस सभापतिमा श्रेष्ठ विजयी
सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपति र अष्टलक्ष्मीलाई उपराष्ट्रपतिको आश्वासन
कांग्रेस तेह्रथुम महासमिति सदस्यमा ११ जना सर्वसम्मत छानिए
जीवन विकास र महिला लघुवित्तको वित्तीय अवस्थालाई तुलना गर्दा कुन सूचकमा कुन बलियो ?
प्रहरीमा २३ सय २० जना सहयोगीदेखि इन्स्पेक्टसम्मलाई जागिरको अवसर
सुडानको डार्फरस्थित एफपियु मिसनबाट स्वदेश फिर्ता भएको प्रहरी टोलीलाई स्वागत
बोलेरोले ठक्कर दिँदा प्रहरीकाे मृत्यु, गाडीमा आगजनी
सात कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दै
प्रोफेसर ईश्वरीको जीवनी नामक आत्मकथाको विमोचन
कांग्रेस अधिवेशनले होटेल चलायमान
जुकेपानीका महिला पिँडालु खेतीतर्फ आकर्षित
देवरको हत्या गरेर जलाएको आरोपमा भाउजू पक्राउ
टिपरको ठक्करले स्कुटर चालकको मृत्यु